Soo dejisan XSplit Broadcaster 2.8.1607.1944 – Vessoft
Streaming video, Qabashada Screen
Soo dejisan XSplit Broadcaster
XSplit Broadcaster – software caan ah oo qabtay shaashadda kombiyuutarka iyo warbaahinta ee qalabka kala duwan video. Software ayaa u saamaxaaya in ay u kala bedesho ilo kala duwan ee warbaahinta inta lagu jiro gudbinta, ku dar content ka fiidiyo ah, ku dar qeybaha la doortay ee shaashadda kombiyuutarka, sawirada iyo content flash. Software ka kooban qalab badan oo ay ku qabsato image iyo signal tayo leh la isugu gudbiyo iyada oo la tixgelinayo fursadaha of your computer. Software ayaa ku siinayaan shaqada leh adeegyada loo jecel yahay YouTube, dhifasho, DailyMotion, GG !!, Justin.tv, Ustream oo kale. Software ayaa sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad badbaadin warbaahinta kombiyuutarka ee falanqaynta iyo tafatirka.
Qabashada Screen iyo warbaahinta
La shaqaynta kaamirooyin badan
Taageer adeegyo badan ma geeyo
XSplit Broadcaster Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... SopCast 4.2
English, Français, Español, Deutsch... WinSCP 5.9.2 Standard iyo Portable